शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा | | Nepali Health
२०७३ असार ८ गते १६:४२ मा प्रकाशित
रुघाखोकी लागिरहने गर्छ भने चिकेन सुप दिनहुँ खाने बानी बसाल्नुहोस् । किनकि, यसले रुघाखोकी लगाउने भाइरस र ब्याक्टेरिया हटाउनुका साथै तपाईंको शरीरमा पानीको अभाव हुन दिँदैन ।
च्याउमा पनि बेटा–ग्लुक्यान पाइन्छ । च्याउ खाइरहने मानिसलाई क्यान्सर लाग्ने जोखिम पनि कम हुन्छ । र शरीरमा रोग लाग्नबाट बचाउँछ
ब्रोकाउलीमा भिटामिन ए, सी र ई पाइन्छन् । साथै, यसमा विभिन्न खाले एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छन् । रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन ब्रोकाउलीको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
लसुनले तरकारीको स्वाद बढाउने काम त गर्छ नै, विभिन्न सरुवा र दीर्घकालीन रोगबाट जोगाउन पनि मद्दत गर्छ । साथै, यसले शरीरमा कोलेस्टरोलको मात्रा घटाउन पनि सहयोग गर्छ । यसमा पाइने एलिसिन नामक तत्वले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्छ ।
रुघाखोकी लागिरहन्छ भने अदुवा खाने गर्नुस् । यसमा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले चिसोजन्य रोगबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । खाना खाँदा अदुवाको टुक्रा लिने र चिया, तरकारी, चटनी आदिमा अदुवा हाल्ने बानी बसाउनु फाइदाजनक हुन्छ ।
बेसारले रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता स–साना रोग लागिरहने मानिसलाई फाइदा पु¥याउँछ । बेसारको सेवनले पेट सफा राख्नमा पनि मद्दत गर्छ ।
अमला /कागती :
अमलामा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ । भिटामिन सी तातोमा नष्ट हुने प्रकृतिको हुन्छ तर अमलामा पाइने भिटामिन सी ताप वा अन्य कारणले नष्ट हुँदैन । यसबाट पाचनक्रिया ठीक रहन्छ भने छाला र केशलाई पनि फाइदा पुग्छ । यसले एन्टी ब्याक्टेरियलका रूपमा प्रभावकारी काम गर्छ । कागतीबाट प्राप्त हुने भिटामिन सी शरीरका लागि विशेष रूपले लाभदायक हुन्छ । बालबालिकालाई सलादमा पनि कागती खान दिनु राम्रो हुन्छ ।
यसका साथै मौसम अनुसारका फलफूल तथा हरिया सागसब्जी, दूध तथा अण्डाको सेवन गर्नु फाइलाजनक हुन्छ ।
शरीर शुद्धिकरण गराउनु छ ? आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक जानुस्